Pokemon Go တချို့ဖုန်း​တွေမှာ ​ဆော့မရတာ ရှိပါလိမ့်​မယ်​ ။ ​ဖြေရှင်းတဲ့ နည်းလမ်း​တွေ ရှိပါတယ်​ ။ ​တွေ့ကြုံ​နေကျ ပြသနာ​ ​ဖြေရှင်းနည်း ​ပြောပြပါမယ်​ ။ တခု သိထားရမှာက pokemon go က Phone အတွက်​ပဲ ထုတ်​ထားတာ ဖြစ်​ပါတယ်​ ။ tablet ​အတွက် မရပါ ။
Q 1. pokemon go application သွင်းမရဘူး ။
သွင်းမရဘူးဆို​တော့ ကိုယ့်​ဖုန်းက သူ့သတ်မှတ်​ချက်​နဲ့ ကိုက်​ညီမညီ စမ်းစစ်​ရပါမယ်​ ။
Android version 4.4 to 6.0.1
အထက်​က ပြထားတဲ့အချက်​အလက်​နဲ့ ကိုယ့်​ဖုန်း ကိုက်​ညီမှု ရှိလား မရှိရင်​​ဆော့မရဘူး​ပေါ့ ။ ရှိရင်​​တော့ App ကို ဘယ်​က download လုပ်​လဲ ဆိုတာ ဆန်းစစ်​ရမယ်​ ။ တခြားက​နေ download လုပ်​ထားရင်​ ဒီ့ပြင်​ တခြား market က​နေ Website ​တွေက​နေ ဆွဲကြည့်​ပါ ။ တချို့ Market ​တွေလည်း အဆင်​​ပြေပါတယ်​ ။ google play က​တော့ စိတ်​အချရဆုံး အဆင်​​ပြေဆုံးပါ ။ google play က download ဆွဲထားတာ​တောင်​မှ ပြသနာ တက်​​နေတယ်​ ဆိုရင်​​တော့ ဖုန်း operating system နဲ့ဆိုင်​သွားပါပြီ ။ error ​တွေရှိ​နေလို့ သွင်းမရတာ ဖြစ်​ပါတယ်​ ။ root လုပ်​ထားရင်​ error ​တွေ ရှိတတ်​ပါတယ်​ ။ official version ​တွေမှာ version update လုပ်​တာများရင်​ version တမျိုးတည်း သုံးတာကြာရင်​ error တက်​တတ်​ပါတယ်​ ။ error ​ပျောက်​​အောင်​ (ဥပမာ ph တခုလုံး reset ချတာမျိုး error ကင်းတဲ့ rom ​ရွေးတင်​တာမျိုး) အရင်​ လုပ်​ပြီးမှ pokemon go သွင်းကြည့်​ကြည့်​ပါ ။
အကြံပြု ချက် ။ https://apps.qoo-app.com/en/app/4186 ဒီကနေလည်း download ဆွဲ ဆော့နိုင်ပါတယ် ။ admin ကိုယ်တိုင်ဆော့နေတာ ဘာ ပြသနာမှ မရှိပါ ။
Q 4. pokemon go သွင်းလို့ရတယ် ။ ဒါပေမယ့် screen ကြီးဖြူပြီး ဘာမှ တက်မလာဘူး ။
app ကို clear uninstall လုပ်ပြီး install ပြန် လုပ်ကြည့်ပါ ။ ပြီးတော့ phone error နဲ့ ဆိုင်​ပါတယ်​ ။ phone အမျိုးအစားနဲ့ ဆိုင်​ပါတယ်​ ။ မရရင် တခြားဖုန်းမှာ စမ်းကြည့်​တာပဲ ဖြစ်​ဖြစ်​ လုပ်​ကြည့်ပါ ။
Q3. Account လုပ်မရဘူး ။
account မလုပ်​မီ အစမှာ မိမိရဲ့ ​မွေးတဲ့ ခုနှစ်​ လ ရက်​ ကို ဖြည့်​ခိုင်းတာ ​တွေ့ရပါလိမ့်​မယ်​ ။ ဒီမှာ သူ့သတ်​မှတ်​ချက်​က အသက်​ ၁၃ နှစ်​ ​ကျော်​ရပါမယ်​ ။ ၁၃နှစ်​ မ​ကျော်​ရင်​ pokemon go ​မ​ပေး​ဆော့ဘူး ။ သတိထားရမယ့်​ အချက်​ပါ ။ ​မွေးသက္ကရာဇ်​​တွေ ဖြည့်​ပြီး​တော့ ​နောက်​ တမျက်​နှာ ဘာနဲ့ sign up လုပ်​မလဲလို့ ​မေးပါလိမ့်​မယ်​ ။ ဒီမှာ ​ရွေးချယ်​စရာ ၂ မျိုး ရှိပါလိမ့်​မယ်​ ။ Google နဲ့ pokemon trainer ဆိုပြီး​တော့ ။ ၂ ခုလုံး တူတူပါပဲ ။ server ကွာသွားပါတယ်​ ။ pokemon trainer ကျ​တော့ server ခဏ ခဏ ကျတတ်​လို့ အ​နောက်​နိုင်​ငံ​တွေမှာ ဝင်​မရတာတို့ အလိုလို sign out ဖြစ်​သွားတို့ ဖြစ်​​နေတာ ​တွေ့ရပါတယ်​ ။ သူက​တော့ အရင်​ကတည်းက ရှိ​နေတဲ့ server ဆိုတဲ့ သူ့မှာ train တာတို့ item ဝယ်​တာတို့ မှာ Team ​တွေ ရှာတာတို့မှာ ပြသနာ မရှိဘူး​ပေါ့ ။ ပြီး​တော့ မြန်​မာနိုင်​ငံလည်း မပါဘူး ။ google ကျ​တော့ ဒီလို မဖြစ်​ပါဘူး ။ သူက server အသစ်​​ပေမယ့်​ ကြီးတယ်​ ။ pokemon trainer server မျိုး sign out ဖြစ်​သွားတာတို့ မရှိဘူး ။ ​Google နဲ့ Niantic တို့ ပူး​ပေါင်းလုပ်​​ဆောင်​​နေဆဲဆို​တော့ မကြာခင်​မှာ Google server လည်း pokemon trainer server မျိုး လုပ်​​ဆောင်​နိုင်​တဲ့ server ဖြစ်​လာပါလိမ့်​မယ်​ ။ အခု​လော​လောဆယ်​​တော့ မြန်​မာပြည်​အ​နေနဲ့ google တခုပဲ ​ရွေးချယ်​ခွင့်​ရှိ​တော့ google နဲ့ပဲ ချိတ်​ကစားပါ ။
Q4. GPS signal not found ပြ​နေတယ်​ ။
အရင်ဦးဆုံး ကိုယ့်ဖုန်းမှာ GPS ရှိမရှိ သိထားဖို့ လိုအပ်ပါတယ် ။ GPS signal က ပိန်းပိတ်​​နေတဲ့ တိုက်​ကြားထဲ တိုက်​ခန်းထဲမှာ မမိပါ ။ မိုးအုံ့​နေရင်​လည်း မမိပါ ။ တိမ်​ထူထပ်​​နေရင်​လည်း မမိပါ ။ ကောင်းကင်မှာ satellite ( ဂြိုလ်​တု) နည်း​နေရင်​လည်း မမိပါ ။ ​ကောင်းကင်​ကြည်​လင်​တဲ့ ​နေ့မျိုးမှာ နံ​ဘေးမှာ တိုက်​တာအ​ဆောက်​အအုံ​တွေ မရှိတဲ့ ​နေရာမျိုး ကုန်းမြင့်​​နေရာမျိုးမှာ စမ်းကြည့်​ပါ ။ ရပါလိမ့်​မယ်​ ။ GPS က ​ကောင်းကင်​မှာ အနည်းဆုံး satellite ၃ လုံး ရှိ​နေမှ အလုပ်​လုပ်​ပါတယ်​ ။ ဒီ​နေရာမှာ ကိုယ့်​​နယ်​​မြေရဲ့ ​ကောင်းကင်​မှာ satellite ဘယ်​​လောက်​လုံးရှိလဲဆိုတာ ကြည့်​နိုင်​ပါတယ်​ ။ Satellite checker နဲ့ ကြည့်​လို့ရပါတယ်​ ။ ကိုယ့်​ဖုန်း က​နေ ​ကောင်းကင်​မှာရှိတဲ့ နီးစပ်​ရာ satellite ၃ လုံးဆီကို signal ပို့ပါတယ်​ ။ ဒီ Satellite ၃ လုံးက​နေ ပြန်​ပို့တဲ့ signal က phone ဆီ ​ရောက်​မှ GPS အလုပ်​လုပ်​ပါတယ်​ ။ သူလည်း သုံးတဲ့သူများရင်​ GPS က မဖတ်​နိုင်​​တော့ဘူး ။ အချိန်​နဲနဲ ​စောင့်​ရပါလိမ့်​မယ်​ ။ satellite checker က app ပါ ။ Android ​ရော iOS မှာ ရနိုင်​ပါတယ်​ ။
​ကောင်းကင်​ရှင်းလင်း ကြည်​လင်​တဲ့​နေ့မျိုးမှာ စမ်းကြည့်​ပါ ။ mock location off လုပ်​ထားပါ ။ google playstore service ဖွင့်​ထားပါ ။ playstore service ကို latest update ရအောင် လုပ်ထားပါ ။
Android အတွက် ဖြေရှင်းနည်း။
ပထမနည်း ။ Setting => Location မှာ turn on လုပ်ပြီး High accuracy မှာ ထားပေးပါ ။
ဒုတိယနည်း ။ Setting => About Phone မှာ ၇ ချက် တို့လိုက်ရင် developer option တက်လာပါလိမ့်မယ် ။ ဒီထဲမှာမှ mock location ကို disable လုပ်ပေးပါ ။
တတိယနည်း ။ Setting => Application manager => Pokemon Go => Permissions => Location မှာ on ထားပေးပါ ။
ဖုန်းကို restart ချကြည့်ပါ ။
Pokemon Go latest version ရောက်မရောက် ကြည့်ပါ ။ မရှိရင် သွင်းပါ ။
power saving mode တွေ လုပ်ထားရင် ပိတ်ပါ ။
airplane mode ကို ခဏဖွင့်ပြီး ပြန်ပိတ်ပြီး ထပ်စမ်းကြည့်ပါ ။
Q5. pokemon ​လေး​တွေ မ​ပေါ်ဘူး ဖြစ်​​နေတယ်​ ။
ဒီအ​ကောင်​​လေး​တွေက random ​ပေါ်​နေတာပါ ။ ​နေရာ အတည်​အကျ အချိန်​အတိအကျ မရှိဘူး ။ GPS နဲ့ server နဲ့ ​ကစားလို့ ရနိုင်​တဲ့ ​နေရာက data ​တွေနဲ့ ​ပေါင်းစပ်​ပြီး ​နေရာ​ဒေသ အလိုက်​​ပေါ်တာ ဖြစ်​ပါတယ်​ ။ ​နေရာတိုင်း ​ပေါ်နိုင်​ပါတယ်​ ။ များတာ နည်းတာပဲ ကွာတာပါ ။ ဒါ​ကြောင့်​ gps မိနိုင်​တဲ့ internet ​ကောင်း​ကောင်းရတဲ့ ​နေရာ​တွေမှာ ​​ဆော့ခိုင်းတာ ဖြစ်​ပါတယ်​ ။ သူများရပြီး ကိုယ်​မရလို့ စိတ်​မညစ်​ပါနဲ့ ။ ကိုယ်​​ရောက်​​နေတဲ့ ​နေရာက server မှာ ​ဆော့တဲ့သူ​တွေများရင်​ ပြည့်​သိပ်​ပြီး ဖြစ်​​နေလို့ ဒီလို ဖြစ်​ရတာပါ ။ Satellite က လူသုံးများလွန်းလို့ ကိုယ်​သုံးတဲ့အချိန်​ signal strength ​တွေကျ​နေတာ​ကြောင့်​ ဘာမှမမိတာ ဖြစ်​ပါတယ်​ ။
Q6. We aren't detecting your phone's orientation. Would you like to turn off AR mode? လို့ ပြနေတယ် ။
AR mode အလုပ်မလုပ်ဘူးဆိုတာ ဖုန်းမှာ Gyroscope မရှိတာကြောင့် ဖြစ်ရတာပါ ။ ဒီလို error မျိုး အရများတဲ့ phone တွေက Sony Experia, HTC 626S နှင့် Huawai ဖုန်းတွေ ဖြစ်ကြပါတယ် ။ iOS 10 beta2တင်ထားတဲ့ iPhone တွေမှာလည်း ဒီလို error မျိုး တက်ပါတယ် ။ AR mode ဖွင့်ထားရင် pokemon လေးတွေကို အပြင်ရှုခင်းနဲ့အတူတူ မြင်ရမှာပါ ။ AR mode မရှိလည်း pokemon လေးတွေ ဖမ်းလို့ရပါတယ် ။ Gyroscope က ဖုန်းထဲကို စက်ရုံက စထုတ်ကတည်းက ထည့်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ် ။ gyroscope မပါတဲ့ ဖုန်းတွေတော့ လုံးဝ ထည့်လို့မရပါ ။ အပေါ်က ဖော်ပြထားတဲ့ ဖုန်းတွေမှာ ကိုယ့်ဖုန်းပါခဲ့ရင် တခြားဖုန်းလဲပြီး ဆော့မှ ရမှာပါ ။ iOS သမားတွေတော့ iOS version အနိမ့်ကို ဆင်းမှပဲ အဆင်ပြေမှာ ဖြစ်ပါတယ် ။
အဆင်ပြေပါစေ ။ ဖတ်ပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ။
Pokemon Go တခြို့ဖုနျး​တှမှော ​ဆော့မရတာ ရှိပါလိမျ့​မယျ​ ။ ​ဖွရှေငျးတဲ့ နညျးလမျး​တှေ ရှိပါတယျ​ ။ ​တှကွေုံ့​နကြေ ပွသနာ​ ​ဖွရှေငျးနညျး ​ပွောပွပါမယျ​ ။ တခု သိထားရမှာက pokemon go က Phone အတှကျ​ပဲ ထုတျ​ထားတာ ဖွဈ​ပါတယျ​ ။ tablet ​အတှကျ မရပါ ။
Q 1. pokemon go application သှငျးမရဘူး ။
သှငျးမရဘူးဆို​တော့ ကိုယျ့​ဖုနျးက သူ့သတျမှတျ​ခကျြ​နဲ့ ကိုကျ​ညီမညီ စမျးစဈ​ရပါမယျ​ ။
အထကျ​က ပွထားတဲ့အခကျြ​အလကျ​နဲ့ ကိုယျ့​ဖုနျး ကိုကျ​ညီမှု ရှိလား မရှိရငျ​​ဆော့မရဘူး​ပေါ့ ။ ရှိရငျ​​တော့ App ကို ဘယျ​က download လုပျ​လဲ ဆိုတာ ဆနျးစဈ​ရမယျ​ ။ တခွားက​နေ download လုပျ​ထားရငျ​ ဒီ့ပွငျ​ တခွား market က​နေ Website ​တှကေ​နေ ဆှဲကွညျ့​ပါ ။ တခြို့ Market ​တှလေညျး အဆငျ​​ပွပေါတယျ​ ။ google play က​တော့ စိတျ​အခရြဆုံး အဆငျ​​ပွဆေုံးပါ ။ google play က download ဆှဲထားတာ​တောငျ​မှ ပွသနာ တကျ​​နတေယျ​ ဆိုရငျ​​တော့ ဖုနျး operating system နဲ့ဆိုငျ​သှားပါပွီ ။ error ​တှရှေိ​နလေို့ သှငျးမရတာ ဖွဈ​ပါတယျ​ ။ root လုပျ​ထားရငျ​ error ​တှေ ရှိတတျ​ပါတယျ​ ။ official version ​တှမှော version update လုပျ​တာမြားရငျ​ version တမြိုးတညျး သုံးတာကွာရငျ​ error တကျ​တတျ​ပါတယျ​ ။ error ​ပြောကျ​​အောငျ​ (ဥပမာ ph တခုလုံး reset ခတြာမြိုး error ကငျးတဲ့ rom ​ရှေးတငျ​တာမြိုး) အရငျ​ လုပျ​ပွီးမှ pokemon go သှငျးကွညျ့​ကွညျ့​ပါ ။
အကွံပွု ခကျြ ။ https://apps.qoo-app.com/en/app/4186 ဒီကနလေညျး download ဆှဲ ဆော့နိုငျပါတယျ ။ admin ကိုယျတိုငျဆော့နတော ဘာ ပွသနာမှ မရှိပါ ။
Q 4. pokemon go သှငျးလို့ရတယျ ။ ဒါပမေယျ့ screen ကွီးဖွူပွီး ဘာမှ တကျမလာဘူး ။
app ကို clear uninstall လုပျပွီး install ပွနျ လုပျကွညျ့ပါ ။ ပွီးတော့ phone error နဲ့ ဆိုငျ​ပါတယျ​ ။ phone အမြိုးအစားနဲ့ ဆိုငျ​ပါတယျ​ ။ မရရငျ တခွားဖုနျးမှာ စမျးကွညျ့​တာပဲ ဖွဈ​ဖွဈ​ လုပျ​ကွညျ့ပါ ။
Q3. Account လုပျမရဘူး ။
account မလုပျ​မီ အစမှာ မိမိရဲ့ ​မှေးတဲ့ ခုနှဈ​ လ ရကျ​ ကို ဖွညျ့​ခိုငျးတာ ​တှရေ့ပါလိမျ့​မယျ​ ။ ဒီမှာ သူ့သတျ​မှတျ​ခကျြ​က အသကျ​ ၁၃ နှဈ​ ​ကြျော​ရပါမယျ​ ။ ၁၃နှဈ​ မ​ကြျော​ရငျ​ pokemon go ​မ​ပေး​ဆော့ဘူး ။ သတိထားရမယျ့​ အခကျြ​ပါ ။ ​မှေးသက်ကရာဇျ​​တှေ ဖွညျ့​ပွီး​တော့ ​နောကျ​ တမကျြ​နှာ ဘာနဲ့ sign up လုပျ​မလဲလို့ ​မေးပါလိမျ့​မယျ​ ။ ဒီမှာ ​ရှေးခယျြ​စရာ ၂ မြိုး ရှိပါလိမျ့​မယျ​ ။ Google နဲ့ pokemon trainer ဆိုပွီး​တော့ ။ ၂ ခုလုံး တူတူပါပဲ ။ server ကှာသှားပါတယျ​ ။ pokemon trainer ကြ​တော့ server ခဏ ခဏ ကတြတျ​လို့ အ​နောကျ​နိုငျ​ငံ​တှမှော ဝငျ​မရတာတို့ အလိုလို sign out ဖွဈ​သှားတို့ ဖွဈ​​နတော ​တှရေ့ပါတယျ​ ။ သူက​တော့ အရငျ​ကတညျးက ရှိ​နတေဲ့ server ဆိုတဲ့ သူ့မှာ train တာတို့ item ဝယျ​တာတို့ မှာ Team ​တှေ ရှာတာတို့မှာ ပွသနာ မရှိဘူး​ပေါ့ ။ ပွီး​တော့ မွနျ​မာနိုငျ​ငံလညျး မပါဘူး ။ google ကြ​တော့ ဒီလို မဖွဈ​ပါဘူး ။ သူက server အသဈ​​ပမေယျ့​ ကွီးတယျ​ ။ pokemon trainer server မြိုး sign out ဖွဈ​သှားတာတို့ မရှိဘူး ။ ​Google နဲ့ Niantic တို့ ပူး​ပေါငျးလုပျ​​ဆောငျ​​နဆေဲဆို​တော့ မကွာခငျ​မှာ Google server လညျး pokemon trainer server မြိုး လုပျ​​ဆောငျ​နိုငျ​တဲ့ server ဖွဈ​လာပါလိမျ့​မယျ​ ။ အခု​လော​လောဆယျ​​တော့ မွနျ​မာပွညျ​အ​နနေဲ့ google တခုပဲ ​ရှေးခယျြ​ခှငျ့​ရှိ​တော့ google နဲ့ပဲ ခြိတျ​ကစားပါ ။
Q4. GPS signal not found ပွ​နတေယျ​ ။
အရငျဦးဆုံး ကိုယျ့ဖုနျးမှာ GPS ရှိမရှိ သိထားဖို့ လိုအပျပါတယျ ။ GPS signal က ပိနျးပိတျ​​နတေဲ့ တိုကျ​ကွားထဲ တိုကျ​ခနျးထဲမှာ မမိပါ ။ မိုးအုံ့​နရေငျ​လညျး မမိပါ ။ တိမျ​ထူထပျ​​နရေငျ​လညျး မမိပါ ။ ကောငျးကငျမှာ satellite ( ဂွိုလျ​တု) နညျး​နရေငျ​လညျး မမိပါ ။ ​ကောငျးကငျ​ကွညျ​လငျ​တဲ့ ​နမြေို့းမှာ နံ​ဘေးမှာ တိုကျ​တာအ​ဆောကျ​အအုံ​တှေ မရှိတဲ့ ​နရောမြိုး ကုနျးမွငျ့​​နရောမြိုးမှာ စမျးကွညျ့​ပါ ။ ရပါလိမျ့​မယျ​ ။ GPS က ​ကောငျးကငျ​မှာ အနညျးဆုံး satellite ၃ လုံး ရှိ​နမှေ အလုပျ​လုပျ​ပါတယျ​ ။ ဒီ​နရောမှာ ကိုယျ့​​နယျ​​မွရေဲ့ ​ကောငျးကငျ​မှာ satellite ဘယျ​​လောကျ​လုံးရှိလဲဆိုတာ ကွညျ့​နိုငျ​ပါတယျ​ ။ Satellite checker နဲ့ ကွညျ့​လို့ရပါတယျ​ ။ ကိုယျ့​ဖုနျး က​နေ ​ကောငျးကငျ​မှာရှိတဲ့ နီးစပျ​ရာ satellite ၃ လုံးဆီကို signal ပို့ပါတယျ​ ။ ဒီ Satellite ၃ လုံးက​နေ ပွနျ​ပို့တဲ့ signal က phone ဆီ ​ရောကျ​မှ GPS အလုပျ​လုပျ​ပါတယျ​ ။ သူလညျး သုံးတဲ့သူမြားရငျ​ GPS က မဖတျ​နိုငျ​​တော့ဘူး ။ အခြိနျ​နဲနဲ ​စောငျ့​ရပါလိမျ့​မယျ​ ။ satellite checker က app ပါ ။ Android ​ရော iOS မှာ ရနိုငျ​ပါတယျ​ ။
​ကောငျးကငျ​ရှငျးလငျး ကွညျ​လငျ​တဲ့​နမြေို့းမှာ စမျးကွညျ့​ပါ ။ mock location off လုပျ​ထားပါ ။ google playstore service ဖှငျ့​ထားပါ ။ playstore service ကို latest update ရအောငျ လုပျထားပါ ။
Android အတှကျ ဖွရှေငျးနညျး။
ပထမနညျး ။ Setting => Location မှာ turn on လုပျပွီး High accuracy မှာ ထားပေးပါ ။
ဒုတိယနညျး ။ Setting => About Phone မှာ ၇ ခကျြ တို့လိုကျရငျ developer option တကျလာပါလိမျ့မယျ ။ ဒီထဲမှာမှ mock location ကို disable လုပျပေးပါ ။
တတိယနညျး ။ Setting => Application manager => Pokemon Go => Permissions => Location မှာ on ထားပေးပါ ။
ဖုနျးကို restart ခကြွညျ့ပါ ။
Pokemon Go latest version ရောကျမရောကျ ကွညျ့ပါ ။ မရှိရငျ သှငျးပါ ။
power saving mode တှေ လုပျထားရငျ ပိတျပါ ။
airplane mode ကို ခဏဖှငျ့ပွီး ပွနျပိတျပွီး ထပျစမျးကွညျ့ပါ ။
Q5. pokemon ​လေး​တှေ မ​ပျေါဘူး ဖွဈ​​နတေယျ​ ။
ဒီအ​ကောငျ​​လေး​တှကေ random ​ပျေါ​နတောပါ ။ ​နရော အတညျ​အကြ အခြိနျ​အတိအကြ မရှိဘူး ။ GPS နဲ့ server နဲ့ ​ကစားလို့ ရနိုငျ​တဲ့ ​နရောက data ​တှနေဲ့ ​ပေါငျးစပျ​ပွီး ​နရော​ဒသေ အလိုကျ​​ပျေါတာ ဖွဈ​ပါတယျ​ ။ ​နရောတိုငျး ​ပျေါနိုငျ​ပါတယျ​ ။ မြားတာ နညျးတာပဲ ကှာတာပါ ။ ဒါ​ကွောငျ့​ gps မိနိုငျ​တဲ့ internet ​ကောငျး​ကောငျးရတဲ့ ​နရော​တှမှော ​​ဆော့ခိုငျးတာ ဖွဈ​ပါတယျ​ ။ သူမြားရပွီး ကိုယျ​မရလို့ စိတျ​မညဈ​ပါနဲ့ ။ ကိုယျ​​ရောကျ​​နတေဲ့ ​နရောက server မှာ ​ဆော့တဲ့သူ​တှမြေားရငျ​ ပွညျ့​သိပျ​ပွီး ဖွဈ​​နလေို့ ဒီလို ဖွဈ​ရတာပါ ။ Satellite က လူသုံးမြားလှနျးလို့ ကိုယျ​သုံးတဲ့အခြိနျ​ signal strength ​တှကြေ​နတော​ကွောငျ့​ ဘာမှမမိတာ ဖွဈ​ပါတယျ​ ။
Q6. We aren't detecting your phone's orientation. Would you like to turn off AR mode? လို့ ပွနတေယျ ။
AR mode အလုပျမလုပျဘူးဆိုတာ ဖုနျးမှာ Gyroscope မရှိတာကွောငျ့ ဖွဈရတာပါ ။ ဒီလို error မြိုး အရမြားတဲ့ phone တှကေ Sony Experia, HTC 626S နှငျ့ Huawai ဖုနျးတှေ ဖွဈကွပါတယျ ။ iOS 10 beta2တငျထားတဲ့ iPhone တှမှောလညျး ဒီလို error မြိုး တကျပါတယျ ။ AR mode ဖှငျ့ထားရငျ pokemon လေးတှကေို အပွငျရှုခငျးနဲ့အတူတူ မွငျရမှာပါ ။ AR mode မရှိလညျး pokemon လေးတှေ ဖမျးလို့ရပါတယျ ။ Gyroscope က ဖုနျးထဲကို စကျရုံက စထုတျကတညျးက ထညျ့ပေးလိုကျတာဖွဈပါတယျ ။ gyroscope မပါတဲ့ ဖုနျးတှတေော့ လုံးဝ ထညျ့လို့မရပါ ။ အပျေါက ဖျောပွထားတဲ့ ဖုနျးတှမှော ကိုယျ့ဖုနျးပါခဲ့ရငျ တခွားဖုနျးလဲပွီး ဆော့မှ ရမှာပါ ။ iOS သမားတှတေော့ iOS version အနိမျ့ကို ဆငျးမှပဲ အဆငျပွမှော ဖွဈပါတယျ ။
အဆငျပွပေါစေ ။ ဖတျပေးတဲ့အတှကျ ကြေးဇူးတငျပါတယျ ။